About – TrueMyanmar.info
We, as our name suggests, aim to fight fake news and misinformation about Myanmar.
We believe fact-checking or providing the correct data is not always the best solution in this information manipulation age. Since we’re inasystem based on fabricated information, we cannot simply let people turn away from fake news sources. But, we can protect their interests from being misled by providing enough information from different sources.
Our mission is to enable you to engage in further information about your interests in Myanmar. Join us and share your message and experience to help people and yourself spot the lies, tricks, or misleadings. We hope this website will serve you well.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုဒ်အမည် အဓိပ္ပါယ်ပါရှိသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအတုအယောင်များနှင့် မမှန်ကန်သည့် အချက်အလက်များကို ထိုးနှက်နိုင်ရန် ဦးတည်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည်မှာ – ယနေ့ သတင်းအချက်အလက်များ ခြယ်လှယ်မှုရှိသည့် ခေတ်ကာလတွင် အချက်အလက်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် သတင်းအမှန်များပေးခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက် အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါ။ လုပ်ကြံသည့် သတင်းအချက်အလက်များပေါ်မူတည်သော စံနစ်တွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိနေကြသည်ဖြစ်ရာ လူအများအား သတင်းအမှား အရင်းအမြစ်များမှ ရှောင်ခွာရန် လွယ်လင့်တကူ လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူများစိတ်ဝင်စားသည့် အချက်အလက်များအပေါ် အခြားအရင်းအမြစ်များမှ လုံလောက်သည့် အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် မမှားယွင်းရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းမှာ – သင့်၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စိတ်ဝင်စားသည့် သတင်းများအတွက် ထပ်ဆောင်း အချက်အလက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားသူများအား လိမ်လည်ခြင်းများ၊ လှည့်ကွက်များ၊ လမ်းကြောင်းအလွဲများကို ရှာဖွေတွေ့မြင်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ သင့်၏ သတင်းစကား နှင့် အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေကြပါ။ ဤဆိုဒ်သည် သင့်အား ကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။